Cunugada Markuu Xanunsan yahay | Bloomington Public Schools - District #271
Home / Caafimadka / Cunugada Markuu Xanunsan yahay
Caafimadka aad ayuu muhiim ugu yahay xaga waxbarashada in heer laga gaaro. Fadlan ku fikir aqbarahan soo socda markat ka fikiraysid inad cunug iskuulka u soo dirtid ama guriga ku haysatid.
Talow cunugayga guriga ma u daaya?
Badanaba walidka iyo ardaydaba su’aalo ayey ka qaban goorta guriga la joojiyo ardayga maxayelay jiro darted. Fadlan cunugada guriga ku hay hadad u moodo in ay hayan waxayabahan...
Qandho ah 100.0 degrees amaba kaban haysayna 24 saac ee lasoo dhafay
Matag ama shuban hayey 24 lasoo dhafay
Korkiisa oo wax cusub ka soo baxay sida rashka
Xanuun u muuqda inuu aad u xunyahay waxyabo cusub sida daal badan, qufuc aan joogsi lahayn iyo neefta oo ku dhagayso
Xanuun haaya dartiis aad u malaynayso in aadida iskuulka waxbo ka faa’idayn
Hadii aad wax su’aal ah qabtid, fadlan laxariir iskuulka aad adiin xafiiskisa cafimadka.
Marka lala xariirayo Waladinta iyo Ilaliyasha
Hadu cunugada ku xanuunsado iskuulka una baahdo inuu guriga aado shaqalaha xafiiska cafimadka aya waxay la xiriirayan waladiinta ama ilalayasha ku qoran foomka dag daga ah Health and Emergency Information form.
Hadii walidiinta la wayo waxa la wacaya ruuxa kuugu qoran foomka ama warqada ku dag daga/ emergency.
Cunugada maloo ogalanayo in uu iskuulka ka wado ruuxan ahayn qofka ku qoran foomka dag daga/emergency.
Cunugada looma ogalanayo in ruux wayn uu iskuulka ka wado.
Haduu jiro wax dag dag ah oo ku saabsan xaga caafimadka waxaa loo wacaya 911 ka. Markas kadib waxa la isku dayaya in walidka ama ilalayasha la laxiriiro, sidoo kale waxaa lala xiriira ruxii foomkas kugu qoran.
Hadii uu cunugada cafimadkoodiisa wax iska badalan oo jiro cusub soo wajahdo, fadlan laxiriir xafiiska cafimadka ee iskuulka uu ado kalana hadal xiliga uu cunugada soo noqondono.
Cudur la isku daarankaro
Fadlan halkan ka eeg Infectious Diseases in Childcare Settings and Schools faah faahin badan oo ku saabsan cuduro badan oo la isku gudbiyo sida….
Iskuulka inaad soo wacdo waad ku qasban tahay hadii uu cunugada maqnanayo. Malin walba oo uu cunugada iskuulka ka maqnanayo waa inad iskuulka soo wargalisa. Fadlan markad soo wacaysid iskuulka sheeg cunugada magaciisa, macalinkiis/fasalka uu dhigto iyo sababta uu u maqnanayo. Haduu cunugada xanuunsanyahay sheeg tilmaha loo hayo ama jiro cusub oo haysa oona la isku daaran karo haday jirto.
Fadlan la soo xiriir xafiiska caafimadka iskulka intuusan cunugada iskuulka ku soo noqonin haduu cunugada dhawac garay ama uu hayo xanuun u bahan daawo in la siiyo.
Hadii aadan iskuulka soo wicin soona sheegin in uu cunugada maqnanayo, iskuulka wuxu soo wacaya numberka ku yaala warqada dag daga/emergency form hadii lagu wayana waxa laguu rabaya fariin.
Numberka aad soo wacaysid hadii usan cunugada iskuulka imanaynin
Hillcrest Community (952) 681-5302
Indian Mounds (952) 681-6002
Oak Grove Elementary (952) 681-6802
Olson Elementary (952) 806-8802
Valley View Elementary (952) 681-5702
Washburn Elementary (952) 681-5502
Westwood Elementary (952) 806-7202
Oak Grove Middle (952) 681-6602
Olson Middle (952) 806-8602
Valley View Middle (952) 681-5802
Jefferson High School (952) 806-7602
Kennedy High School (952) 681-5002